रातदिन श्रीमानले सम्पर्क गरेर दुःख दिएको भन्दै सरकारसँग यी महिलाले राखे अचम्मको माग ! - Nepalese Times
खानेपानी कार्यालयका हाकिमलाई सिके राउतका कार्यकर्ताले नाङ्गेझार पारेर यसरी गाउँ घुमाए, कारण यस्तो ! 52 मिनेट अघि
रातदिन श्रीमानले सम्पर्क गरेर दुःख दिएको भन्दै सरकारसँग यी महिलाले राखे अचम्मको माग !
नेप्लिज संवाददाता १६ आश्विन २०७८, शनिबार १३:४३ (2 हप्ता अघि) २७७ जनाले पढ़िसके
एजेन्सी । विश्वभर कोरोना महामारी अझै पनि कम हुन सकिरहेको छैन । कोरोना फैलावटलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले अहिले पनि विभिन्न मापदण्डहरु जारी नै राखेको छ । अफ्रिका लगायत केही देशहरूमा महिलाहरूले लकडाउनका कारण धेरै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका समाचार केही समयअघि बाहिर आएका छन् ।
घरमा बन्द भएकाहरु टिभी, मोबाइल, इन्टरनेट बाहेक आफ्नो यौ–न जीवनको आनन्द पनि लिइरहेका छन् । नेपालमा अहिले ‘अभागीले विहे गरेको समयमा भुकम्प आउँछ, भाग्यमानीले गर्दा लकडाउन हुन्छ’ भनेर ब्यङ्ग्य गर्ने गरिएको छ ।
यसमा कसैले पनि आशंका गर्न सक्दैन कि मान्छेहरु आफ्नो इच्छा अनुसार हर सम्भव कायर्हहरु गरिरहेका छन् । तर नेपालीमा नै ‘धेरै खायो भने चीनी पनि गुलीयो हुन्छ’ भन्ने अर्को उखान पनि रहेको छ । यस्तै घटना अफ्रिकी मुलुकहरुमा पुरुषहरुले अत्याधिक यौ –न चाहना राख्दा त्यहाँका महिलाहरु चिन्तामा परेका छन् ।
दिन रात आफ्ना पतिले बारम्बार गरिरहेको यस हर्कतले दुःख पाइरहेकी एउटी महिलाको पिडा अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । भिडियोमा उल्लेख गरिए अनुसार लकडाउनका कारण बेरोजगार भएका उनका श्रीमान घरमा बारम्बार यौ– न सम्बन्ध राख्न खोजिरहेका हुन्छन् ।
यो घटना अफ्रिकी देश घानाको हो । यहाँ आफ्ना श्रीमानका कारण तनाबमा आएकी एक महिलाले एउटा भिडियो बनाएर सरकारको अगाडि आफ्नो पीडा व्यक्त गरिन् ।
उक्त महिलाले घानाका राष्ट्रपति नाना अकुफो एडोजलाई लकडाउन समाप्त गर्नका लागि अपील गरेकी छिन् । यो भिडियो विभिन्न युट्यब च्यानलमा अपलोड गरिएको छ । जसमा महिलाले लकडाउन समाप्त गर्न सरकारलाई अपील गरिरहेकी छिन ।
घानाका स्थानीय मिडियामा यो भिडियोलाई उद्धृत गर्दै समाचार प्रकाशित हुँदैछन् । आफ्ना श्रीमानबाट भइरहेको यस व्यवहारबाट हैरान भएकी ति महिला तत्काल उनी काममा गएको हेर्न चाहान्छिन् ।
यसकारण उनले सरकारसँग लकडाउन समाप्त पुर्ण रुपमा नभए पनि सबै कार्यालय खोल्न अपिल गरेकी छन । ताकि उनका श्रीमान् काममा जान सकून् र उनले त्यस्तो समस्याहरूको सामना गर्नु नपरोस् । घानाको स्थानीय मिडियामा प्रकाशित रिपोर्टका अनुसार धेरै महिलाले आफ्नो पतिको बारेमा यस्तो खालको खुलासा गरिरहेका छन् ।
पतिले पटकपटक गरिरहेको सम्बन्धको मागबाट उनीहरु आजित भएका छन् । महिलाहरु भन्छन्, ‘धेरै यौ–न सम्पर्क गर्नाले हाम्रो स्वास्थ्यलाई असर गरिरहेको छ । तर श्रीमानको माग घटिरहेको छैन ।’
ट्विटर सहित अन्य सामाजिक सञ्जालहरुमा भाइरल भइरहेको एक भिडियोमा महिलाले भनिरहेकी छिन्, ‘मेरो निन्द्रा खुलेको हुँदै मेरा पति यौ नसम्बन्ध राख्न तयार भएर बसेका हुन्छन् । पहिले उसलाई सन्तुष्ट पार्छु, र भान्सामा गएर खाना पकाउछु । उसले खाना खान्छ, त्यसपछि टिभी हेर्छ अनी फेरि यौ– न सम्पर्कको माग गर्दछ । त्यसपछि खाली यौ– नसम्पर्क । फेरि यौ– नसम्पर्क ।
अर्को पटक पनि यौ– नसम्पर्क । के महिलाहरू लकडाउनमा यौ– नसम्पर्कका लागि बसिरहेका छन् ? कि हामी वास्तवमा कोरोनाभाइरसको डरमा बन्द भएका छौं, हामी आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाह गर्न लकडाउनका छौं, सही ? मेरो श्रीमान्‌ले धेरै यौ– न सम्बन्ध राख्नु भएको छ । म सरकारबाट मद्दत चाहन्छु ।’ बीबीसी नेपालीबाट ।